Maamulka Jubba oo hal arin beeniyay Sheegayna in…. | Muqdisho News	Sunday, August 2nd, 2015	Home
Maamulka Jubba oo hal arin beeniyay Sheegayna in….
Jan 21, 2015 - jawaab	Geele Maxamed Aadan Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Maamulka Jubba oo la hadlay warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in been abuur ay tahay wararka sheegaya in Ciidamada Jubba ay dad gaar ah ku dilaan Magaalada Kismayo.
Waxa uu sidoo kale sheegay in arrintaasi aysan ahayn mid xaqiiqo ah isla markaana laga been abuurayo Saraakiisha iyo Ciidamada Maamulka Jubba
Geelle Maxamed Aadan ayaa intaasi ku daray in shaqsiyaadka arrimahaasi ka sheegayo Warbaahinta ay yihiin kuwa neceb nabada iyo hormarka Maamulka Jubba isla markaana ay doonayaan in ay isku diraan beelaha daga Gobolkaasi.
Ciidamada Maamulka Jubba ayaa inta adan waxa lagu eedeeyaa dilalka ka dhaca Magaalada Kismaayo, waxana Shalay Magaalada Kismaayo ka furmay Shir loogu hadlaayay dhismaha xubnaha Baarlamaanka ee Maamulkaasi.